Abavelisi kunye nabaxhasi bePet Paw Nail I-China Pet Paw Nail Clipeer Factory
1. Iibhleyidi ezomeleleyo zekati uzipho lwesikhonkwane esenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, sinamandla ngokwaneleyo okusika iinzipho zekati yakho ngokusika kube kanye.
2. Ikati efaka isikhonkwane sezikhonkwane ineqhaga lokhuseleko elenza ukuba uphephe umngcipheko wokwenzakala ngengozi.
3. Ikati iyizipho yokucheba isikhonkwane ngezinto ezintle, ukubambelela ngokulula, ukungatyibiliki, izibambo ze-ergonomic ezihlala zikhuselekile endaweni yezandla zakho.
4. Isikhonkwane sethu esikhanyayo nesilungele ikati sizenzele izilwanyana ezincinci. Kananjalo inokuhanjiswa ngokulula naphi na apho uhamba khona.
Ifayile ye-Pet Nail ikhuselekile kwaye ifezekisa ngokulula isikhonkwane esigqityiweyo kunye nomda weDayimani. Amakristali amancinci afakwe kwi-nickel ngokukhawuleza iifayile zesilwanyana'isineyile. Ibhedi yefayile yesikhonkwane ifakiwe ukuze ilingane isikhonkwane.
Isilumko sekati sokucoca ikatala
Iibhloko zokusika ezisetyenziselwa ukwenza i-clipper yekati yethu yenziwe ngentsimbi eyomeleleyo ukuze kuqinisekiswe ukuba yomelele kwaye iyaphinda isebenze kwiminyaka ezayo.
Isilumko sekati esingenasici esingenasici sinempahla yokubamba enerabha ethintela ukutyibilika xa usika.
Ngelixa intsimbi yokucheba ikati yesinyithi engenasinxibo ikhethwa ngabahlohli abaziingcali, ikwabalulekile nakwinja yemihla ngemihla kunye nabanini bekati. Sebenzisa le nto incinci yokucheba ikati yesinyithi ukuze ugcine iinzipho zezilwanyana zasekhaya ziphilile.
Ikati encinci yeNzipho yesiClipper
Izikhonkwane zethu ezikhaphukhaphu ziyilelwe ukuba zisetyenziswe kwizilwanyana ezincinci, ezinjengezinja ezincinci, iikati kunye nemivundla.
Isikhonkwane esincinci sentsimbi yekati senziwe ngentsimbi engenasici ngoko ke yi-hypoallergenic kwaye ihlala ixesha elide.
Isiphatho sesipikili sekati esincinci sigqityiwe ngesambatho esityibilikayo, sikuvumela ukuba ubabambe ngokukhuselekileyo nangokonwaba ukuze kuthintelwe iingozi ezibuhlungu.
Isikere sekati yobungcali
Isikere sobuchule bekati yobuchwephesha senziwe nge-ergonomic nge-razor-sharp steel stainless semi-setyhula blade engled. Uyakwazi ukubona into oyenzayo kwaye akuncede ubone ukuba ufuna kangakanani, kuthintela ukungcoliswa kwegazi ngaphandle kwento esheshayo.
Isikere sobuchule bekati yobuchwephesha sibonisa izinto ezikhululekileyo nezingatyibilikiyo Siqinisekisa ukusetyenziswa ngokulula kunye nokuthintela ukusikwa ngengozi nokusikwa.
Usebenzisa esi sikere senzipho yekati yobuchule kwaye usike iinzipho zomntwana wakho omncinci, iinzipho, kukhuselekile kwaye kufanelekile.